WARBIXIN:Shabakada Goal.com Oo Soo Saartay Natiijada Codbixintii Ay Dadwaynaha Ka Qaaday Ee 16 Ka Ciyaartoy Ee Xili Ciyaareedkan Ugu Fiicanaa Kooxaha Waa Wayn Ee Yurub, Xidgee Xili Ciyaareedkan Kooxdaada Ugu Fiican ? | Haqabtire News
WARBIXIN:Shabakada Goal.com Oo Soo Saartay Natiijada Codbixintii Ay Dadwaynaha Ka Qaaday Ee 16 Ka Ciyaartoy Ee Xili Ciyaareedkan Ugu Fiicanaa Kooxaha Waa Wayn Ee Yurub, Xidgee Xili Ciyaareedkan Kooxdaada Ugu Fiican ?
Shabakada caalamiga ah ee ciyaaraha ee Goal.com ayaa soo saartay liiska ciyaartoy ku guulaystay codbixintii ay dadwaynaha aduunka ka qaaday ee lagu doo dooranayay 16 ka ciyaartoy ee xili ciyaareedkan ugu fiicnaa kooxaha waa wayne ee Yurub.Goal ayaa shaaciyay 16 ka ciyaartoy ee ku guulaystay codbixintii dadku ay dhiibteen ee loo doortay xidigaha xili ciyaareedkan soo bandhigay qaab ciyaareedka ugu fiican.
Haddaba waxaad halkan kaga bogan kartaa dhamaan 16 ka ciyaartoy ee laga soo doortay kooxaha waa wayn ee Yurub iyo mid kastaaba kooxda uu ka tirsan yahay.Waxayna 16 ka ciyaartoy ee liiskan ku soo baxay ka soo kala jeedaan 16 ka kooxood ee Yurub ugu waa wayn iyada oo xidig kasta oo liiskan ku soo baxay ay jamaahiirta kubbada cagtu u soo doorteen in uu kooxdiisa ugu fiican yahay.Kooxda Leicester City oo xili ciyaareedkan wacdaro soo badhigay ayaa liiskan 16 ku ah.
Kooxaha ay liiskan ciyaartoydoodu ku soo baxday ayaa kala ah Manchester United, Borussia Dortmund,Manchester City,Atletico Madrid, PSG,Arsenal, Inter Milan, Tottenham, Real Madrid, Juventus, Liverpool, Bayern Munich, Chelsea, AC Milan, Barcelona iyo Leicester City.
16-DAVID DEVA- MANCHESTER UNITED
David De Gea ayaa loo doortay xidigii Manchester United xili ciyaareedkan ugu fiicanaa wuxuuna kooxda Louis Van Gaal ka caawiyay in ay guulo muhiim ah gaadho isaga oo waliba dhibco badan u badbaadiyay. De Gea ayaa xili ciyaareedka ahaa ciyaartoyga ugu fiicnaa Red Devils. waxaana sidaa ku soo doortay jamaahiirta kubbada cagta iyo gaar ahaan jamaahiirta Man United.
15-HENRIKH MKHITARYAN- BORUSSIA DORTMUND
Xidiga khakda dhexe ee kooxda Dortmund ee Mkhitaryan ayaa loo doortay in uu xili ciyaareedkan ahaa xidiga kooxdiisa ugu fiican kadib xili ciyaareed uu soo bandhigay qaab ciyaareed ilqabad leh isla markaana uu kooxdiisa ka caawiyay in ay si xoogan u tartanto.
14- KEVIN DE BRUYNE- MANCHESTER CITY
Kevin De Bruyne oo ay Manchester City xagaagii hore kala soo wareegtay kooxda Wolfsburg ayaa xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Etihad Stadium soo badhigay qaab ciyaareed cajiib ah waxaana loogu codeeyay xididigii xili ciyaareedkan ugu fiicnaa Sky Blues.
13-ANTONINE GRIEZMANN-ATLETICO MADRID
Waa mid ka mid ah rukumada adag ee ay ku taagan tahay kooxda Diego Simeone, waxaana si cad xidiga kooxda Ateltioc Madrid xili ciyaareedkan ugu fiican loogu codeeyay xidiga ree France ee Antoine Griezmann oo udub dhexaad u ah horumar kooxda Ateltico Madrid oo ku tartamysa Champions Leaque-ga iyo la Ligaha.
12-ZLATAN IBRAHIMOVIC-PARIS SAINT -GERMAIN
Ibrahimovic ayaa xili ciyaareedkan soo badhigay mid ka mid ah qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa si uu kooxda PSG uga caawiyo in ay sii wadato horumarkeeda, wuxuuna door wayn ku lahaa in ay PSG soo gaadhay sideed dhamaadka Champions leaque-ga isla markaana ay sii wadato koobka ay iska yeelatay ee horyaalka France.Waxaana Ibrahimovic loogu codeeyay xidigii PSG xili ciyaareedkan ugu fiicnaa.
11-MESUT OZIL- ARSENAL
Xidiga xulka qaranka Germany iyo kooxda Arsenal ee Mesut Ozil ayaa shaki la’aan ahaa xidiga xili ciyaareedkan Gunners ugu fiicnaa, waxaana sidaa loogu codeeyay ciyaartoyga Emirates Stadium xili ciyaareedkan ugu fiican kadib markii uu noqday ciyaartoyga fursadaha ugu badan abuuray isla markaana sameeyay 18 gool caawineed oo Premier Leaque-ga ah wuxuuna u baahan yahay laba gool caawineed oo kaliya si uu jabiyo rekoodhkii gool caawinta premier Leaque-ga ee Henry.
10-MOURO ICARDI-INTER MILAN
Inter Milan ayaa qaybtii hore ee xili ciyaareedkan u muuqatay in ay si xoogan ugu tartamayso koobka horyaalka Talyaaniga laakiin kooxda Roberto Mancini ayaa awoodi wayday in ay Juventus kula loolanto Serie A-da basle Mouro Icardi ayaa loogu codeeyay xidigii xili ciyaareedkan ugu fiicnaa Inter Milan.
9-HARRY KANE- TOTTENHAM
Mishiinka gool dhalinta Tottenham ee Harry Kane oo xili ciyaareedkan ku soo baxay shaxda kooxda premeir Leaque-ga ugu fiicnayd isla markaana sidoo kale ku soo baxay shaxda kooxda da’yarta Yurub ugu fiican ee ay France Football soo saartay ayaa xili ciyaareedkan premeir Leaque-ga hore uga soo dhaliyay 23 gool waxaana loo doortay xidigii Spurs xili ciyaareedkan ugu fiicnaa.
8-CRISTIANO RONLADO-REAL MADRID
Cristiano Ronaldo ayaa wali sii wata qaab ciyaareedkiisa fiican ee uu xili ciyaareedyo badan soo joogtaynayay, wuxuuna markale xili ciyaareedkan u tartamayaa kabta dahabka ah ee Yurub iyo gool dhalinta La Ligaha wuxuuna kaalina labaad ugu jiraa 31 gool isaga oo saddex gool ka danbeeya Luis Suarez. Ronaldo ayaa loo doortay xidigii xili ciyaareedkan ugu fiicnaa kooxdiisa Real Madrid.
7-GIANLUIGI BUFFON- JUVENTUS
Goolhayaha halyayga ah ee xulka qaranka Talyaaniga iyo kooxda Juventus ee Buffon ayaa markale muujiyay in ayna ka dhamaan kubbada cagta uu caanka ku noqday wuxuuna xili ciyaareedkan rekoodh ka dhigay Serie A Talyaaniga kadib markii uu 34 kulan oo uu saftay 20ka mid ah uu garoonka ka baxay isaga oo aan wax gool ah laga dhalin, waxaana loo doortay ciyaartoygii xili ciyaareedkan ugu fiicnaa Juventus.
6-PHILIPPE COUTINHO- LIVERPOOL
Xidiga khadka dhexe ee kooxda Liverpool ee Philippe Coutinho oo ku soo baxay shaxda da’yarta Yurub ugu fiican ee ay France Football soo saartay ayaa markale loo doortay in uu ahaa xidiga xili ciyaareedkan ugu fiicanaa kooxdiisa Reds. Coutinho ayaa Reds u dhaliyay 10 gool wuxuuna sameeyay 5 gool caawineed . 23 jirkan ree Brazil ayaa hadda ka mid ah xidigaha Reds ugu fiican wuxuuna kooxda Klopp ka caawiyay in ay soo gaadho afar dhamaadka Europa Leaque-ga.
5-ROBERT LEWANDOWSKI- BAYERN MUNICH
Gooldhaliyaha kooxda Bayern Munich iyo xulka qaranka Polland ee Robert Lewandowski ayaa xili ciyaareedkan si cajiib ah ku galay buuga dhacdooyinka layaabka leh ee aduunka kadib markii uu 9 daqiiqo ku dhaliyay 5 gool, wuxuuna xili ciyaareedkan soo badhigay qaab ciyaareed cajiib ah, waxaana loo doortay in uu ahaa xidigii Bayern Munich xili ciyaareedkan ugu fiicnaa.
4- WILLIAN- CHELSEA
Chelsea ayay xili ciyaareedkan u ahayd misiibo iyo mugdi ay meel ay uga baxdo garan wayday, laakiin Willain ayaa markasta ahaa iftiinka kaliya ee ka soo hadhay ciyaartoyda Blues ee xili ciyaareedkan muuqbeeshay. Xidiga ree Brazil ayaa sii joogteeyay qaab ciyaareedkiisii xili ciyaareedkii hore waxaana si shaki la’aan ah loogu doortay xidigii xili ciyaareedkan Chelsea ugu fiicnaa.
3-GIANLUIGI DONNARUMMA- AC MILAN
Kooxda AC Milan ayaan wali helin xalkii ay dib ugu soo laaban lahayd booskii ay ku lahayd kooxaha waa wayn ee Yurub , waxayna wali la dhibtoonaysaa qaab ciyaareed aan joogto ahayn. Laakiin goolhayaha mustaqbalka wayn ku leh kubbada cagta ee Donnarumma ayaa loo doortay in uu ahaa ciyaartoygii AC Milan xili ciyareedkan ugu fiicanaa.
2- LUIS SUAREZ- BARCELONA
Luis Suarez ayaa ku jira xili ciyaareedkiisii abid ugu fiicnaa waayihiisa ciyaareed, wuxuuna kooxdiisa Barcelona ka caawiyay in ay u tartanto La Ligaha iyo waliba Copa Del Rey. Luis Suarez ayaa laba kulan oo xidhiidh ah dhawan ku dhaliyay 8 gool halka uu laba kulan ku lug lahaa 11 gool wuxuuna Barcelona xili ciyaareedkan udhaliyay 53 gool oo tartamada oo dhan ah. Suarez ayaa gool dhalinta La Ligaha u haya 34 gool waxaana loo doortay xidigii xili ciyaareeedkan ugu fiicnaa Barcelona.
1-RIYAD MAHREZ-LECIESTER CITY
Ugu danbayn, xidiga xili ciyaareedkan ku guulaystay abaal marinta xidiga sanadka horyaalka Ingiriiska ugu fiicanaa ee Riyad Mahrez, miyaa loo dooran waayi karaa xidigii Leicester City xili ciyaareedkan ugu fiicnaa? jawaabtu waa maya. Waxaana si shaki la’aan ah Mahrez loogu doortay xidigii xili ciyaareedkan ugu fiicnaa Leicester City.
Haddaba akhriste, xidigaha aan soo sheegnay, ma yihiin kuwii xili ciyaareedkan ugu fiicnaa kooxaha ay ka soo kala jeedaan jeedaan? Haddii aanu xidiga liiskan ku jiraa kooxdaada ugu fiicnayn, xidigee ayaad k ubadali lahayd?